Shirkad La Magacbaxday Takaaful oo Isbaaro dadban ku heyso Gaadiidleyda Muqdisho, – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Shirkad La Magacbaxday Takaaful oo Isbaaro dadban ku heyso Gaadiidleyda Muqdisho,
Shirkad lagu Magacaabo Takaaful ee ay leeyihiin Ganacsato Soomaaliyeed oo kaashaneysa Saraakiil iyo Ciidamo ka tirsan Booliska Dowladda Federaalka Soomaaaliya ayaa Magaalada Muqdisho ka billaabay Isbaaro Dadban.
Sida uu Idaacadda Shabelle u xaqiijiyay Guddoomiye ku xigeenka Iskaashatada Gaadiidleyda Gobolka Banaadir Maxamed Rashiid Maye Aadan Shirkadan Takaaful oo ay leeyihiin Rag Ganacsato ah ayaa waxa uu sheegay in Gaadiidleyda ay iyagoo ugu awood sheegaanaya Ciidamada Booliska dowladda Federaalka oo is faham uu kala dhexeeyo ay lacago baad ah ka qaado.
Waxaana Shirkadaan lagu Magacaabo Takaaful raga sameystay ay qiil ka dhiganayaan in ay yihiin Shirkad Ceymis ah, mana jiro qorsho Gaadiidleyda ay isku ogyihiin oo ku aadan waxa ay u ceymiyaan haddii Gaadiidleyda dhibaato soo gaarto Gaadiidkooda , Waddooyinka iyo wax weliba oo fududeeyda adeega Gaadiidleyda.
Sidaas daraadeed ayey qabaan Iskaashatada Gaadiidleyda Gobolka Banaadir in Shirkadda Takaaful tahay Isbaaro Garab og taasi oo ay tilmaameen in ay cadeyn u tahay cabasho maanta ay ka sameyn rabeen dhacaasi qaawan lagu hayo in loo xiray Guddoomiyaha Iskaashatooyinka Gaadiidleyda Gobolka Banaadir iyo Xoghayihiisa.
Shirkadda Takaaful ayaa ka mid ah Shirkado la sheego in ay ku leeyihiin shaqsiyaad ku taamaya Xasaanadda dowladda oo dalka ka hir galay islamarkaana iyadoo awooda dowladda loo isticmaalayo dadka rayidka ah lacago baad ah looga qaato.
Shirkadahaas ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Shirkad lagu Magacaabo Sahal oo Km4 iyo Air-Poer-ka Aadan Cade iyadana jid gooyo Garab og u dhigatay shacabka kadib markii lacago Tobanaan dollar ah wadadaas lagu lugeyn karo bilowday in ay uga qaado shacabka daneynaya in ay ka dhoofaan Garoonka Aadan Cade.
Arrimahaan ayaa waxaa si weyn u hadal haaya Shacabka reer Muqdisho kuna sheegeen in ay soo ifbaxayaan Isbaarooyin Sharciyeesan.
Previous: Midowga Yurub oo sii wadaya howlagllada ka dhanka ah Burcad Badeeda Somaliya
Next: EU to keep patrolling for Somali pirates until end of 2018